Eeg rikoodhadii laga diiwaan geliyey kulankii Chelsea vs Spurs – Gool FM
(London) 02 Maajo 2016 – Spurs wax guul ah kalama ay soo hoyan Stamford Bridge 28-kii kulan ee ugu dambeysay tartamada oo dhan 10-barbaro iyo 18-jeer oo afka ciida loo daray markii ugu dambeeyay ay ku soo adkaato waxay ahayd bishii Feebaraayo 1990-kii.
Harry Kane waa laacibka goolasha ugu badan Premier League ku soo dhaliya meel ka baxsan garoonkooda xilli ciyaareedkan 15-gool.
Kaliya Mesut Ozil oo sameyay 18-caawin Premier League ayaa ka badan oo kaliya Christian Eriksen ee u safta Tottenham 13-caawin.
Tottenham iyo West Ham waa kooxaha ugu badan oo ay guul darro soo gaarto iyagoo qeybta hore ee ciyaarta ku hogaaminaya 2-gool iyo ka badan min afar jeer, inkastoo ay Tottenham bar-baro la gashay Chelsea.
Eden Hazard ayaa dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay Premier League ee garoonkooda Stamford Bridge muddo 365-maalmood ah.
Leicester City ayaa noqotay kooxdii 24-aad ee ku guuleysata horyaalka Ingiriiska. Claudio Ranieri ayaa noqday tababarihii 8-aad ee ku guuleysta Premier League.
Tottenham oo noqotay naadigii ugu horreeyay ebid taariikhda Premier League oo sagaal ciyaaryahan ay ka qaataan kaarka jaalaha hal kulan.
EPL: CHEL VS TOT 2-2...Kooxda Leicester oo noqotay horyaalladda EPL + Sawirro